धादिङमा फेरि मिनिट्रक दुर्घटना छ जनाकाे निधन – PathivaraOnline
Home > समाचार > धादिङमा फेरि मिनिट्रक दुर्घटना छ जनाकाे निधन
धादिङमा फेरि मिनिट्रक दुर्घटना छ जनाकाे निधन
admin January 21, 2020 समाचार	0
काठमाडौं । धादिङ, नीलकण्ठ नगरपालिका–८ मा मिनिट्रक गाडी दु र्घ ट ना हुँदा ६ जनाको निधन भएको छ । धादिङकै ज्वा ला मु खी गाउँपालिका–४ ढोलामण्डलीको दर्शन गरेर फर्किएका तीर्थयात्री बोकेको ग १ ख ८०१२ नम्बरको मिनिट्रक सडकमै प ल्टिँ दा ६ जनाको मृ त्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । दु र्घ ट ना दिउँसो ३:५० बजे भएको र २० तीर्थयात्री सक्त घा इ ते भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार घ ट ना स्थ लमा प्रहरी परिचालन भइसकेका छन् । घा इ ते को जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घा इ ते लाई काठमाडौं ल्याउन हेलिकोप्टर मगाइसकेको उनले बताए । मिनिट्रक ज्वालामुखी गाउँपालिका ४ बाट धादिङबेसी फर्किँदै गरेको बताइएको छ । गाडीमा करिब ४० यात्रु सवार रहेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । गाउँपालिकाको ढोलामण्डलीमा मंगलबार मेला लागेको र तीर्थयात्री सोही मेला दर्शन गर्न गएको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् ।
प्रमिलाले धोका दिएरपछि बाजा बजाएर बिहे गर्ने सन्तोषको घोषणा – भिडियो सहित
काठमाडौं । अहिले सामाजिक संजालमा तातिरहेको घ टना हो चितवनको सन्तोश सुनार र प्रमिला सुनारको कहानी। श्रीमान सन्तोश बिदेशको 50 डिग्रीको घाममा कमाएको सबै पैसा लिएर र भएको जग्गा पनि लिएर फरार भएकी श्रीमती प्रमिला सुनौल बाट रङेहात पर मान्छे सङ भेटिएपछी अहिले यो कहानिले कानुनी रुप लिएको छ।
त्यस्तै यहि कहानीको बिचार गर्न चर्चित नेता तथा विश्लेषक तथा बक्ता पुण्य गौतम चितवन स्थित सन्तोषको घरमा पुगेर सन्तोष सुनार संग भलाकुसारी गरेका छन। उनले सन्तोषलाई बिहे गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधेको प्रश्नमा अब छोराछोरीको भविष्य बनाएर मात्र आफुले यस बारे सोच्ने बताएका छन।
प्रमिलाका ११ वर्षीय छोरा र ९ वर्षकि छोरी पनि रहेका छन । प्रमिला सम्पर्कविहिन हुनुभन्दा पʼहिले घरमा एक जना मान्छे घरमा आउने, जाने बस्ने गरेको छोरोले भनेको सन्तोषले बताए । विʼदेशमा कमाएको सवै सम्पत्ती लिएर हिडेपछि सन्तोष तʼनावमा रहेका छन । पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो पीडा सुनाउँदै गर्दा उनी निकै भावुक बने ।
उनको बोली नै अवरुद्ध भएको छ । उनले बोल्नै नसकेपछि संगै रहेकी दिदीले थप कुरा खुलाएकी थिइन् । श्रीमती घर बाहिर निस्कनु अघि एक दिन पहिला पनि फोनमा कुरा भएको उनले बताए । उनले आफु हेर्दा नराम्रो भएपनि मैले जति सुख कसैले नदिने पनि उनले दावी गरे । उनले निकै भावुक हुँदै भने प्रमिला मलाई धोका दिएर गएकी छौं, म कसम खाएर भन्छु मैले जति माया तिमीलाई कसैले पनि खुसी दिन सक्दैन ।
प्रमिलाले आफु घर बाहिर निस्केर जानु अघि आफ्नो भाईबुहारीलाई फोन गरेर आफु अरुनै केटासंग विवाह गरेर जान लागेको बताएको आफुले जानकारी दिएकी थिइन् । उनले आफु विदेशमा बस्ने केटासंग विवाह गरेर जान लागेको भनेर आफ्नो भाईबुहारीलाई भनेको पत्रकार सम्मेलनमा दिदीले सुनाइन् ।
थप जानकारी भिडियो बाट हेर्नुहोसः
अष्ट्रेलियामा यस्तो भयावह स्थिति, धुलो युक्त आँधी नथामिदै यस्तो असिना बर्सियो… बिजुलीकाे लाइन छैन….
गायिका आस्था राउतकाे पक्षमा साँसद नवराज सिलवाल बाेल्दा सबै चकित ! के भने ? (भिडियो सहित)
भागरथी प्रकरणमा अनुसन्धान सफल पर्ने यी दुई प्रहरीको बढुवा!
बल्ल खुल्यो विजय चौधरीको असली पोल: मुनाले अर्की कामदारसंग विजयको बारेमा यस्तो कुरा गर्थिन् ! (भिडियो सहित)
भर्खरै आयो अछामबाट सबैलाई रुवाउने खबर – पुरा हेर्नुहोस